1. Hetu Paccaya | Dhamma Training Center
Jul 20 th, 2020
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁-ဟတေုပစၐစေ,ာ Hetu Paccayo ( Root Condition)PDF File
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၁-ဟတေုပစၐစေ,ာ Hetu Paccayo ( Root Condition) ...
Mar 1 st, 2020
၁- ဟေတုပစ္စယော Hetu Paccayo (Root condition) Pdf File
၁- ဟေတုပစ္စယော Hetu Paccayo (Root condition) Pdf File 1. ဟေတုပစ္စယော Haetu paccayo PDF File...
Feb 28 th, 2020
၁။ ကုသလတ္တိက ၇။ ပဥှာဝါရ ၁။ ပစ္စယာနုလောမံ ၁။ ၀ိဘင်္ဂ၀ါရ ၁။ ဟေတုပစ္စယော Hetu Paccayo (Root Condition) HetuPaccayo Paccayaniddeso Hetupaccayoti – hetū hetusampayuttakānaC...
၁- ဟေတုပစ္စယောHetu Paccayo (Root condition) (2/6)
၁။ ဟေတုပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ zawgyi ၄၀၁။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ ဟေတုပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလာ ဟေတူ သမ္ပယုတ္တကာနံ ခန္ဓာနံ ဟေတုပစ္စယေန ပစ္စယော။ ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ဟေတုပစ္စယေန ပစ္စယော။...
၁- ဟေတုပစ္စယောHetu Paccayo (Root condition) (3/6)
၁။ ဟေတုပစ္စယော zwgyi ဘ၀နှင့် ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ ရှေးဆရာတော်ကြီးများက ဟေတုကို ရေသောက်မြစ်ဟု ဥပမာပြုတော်မူကြပါသည်။ ဟေတုဟူသည် အကြောင်း တရားဖြစ်သည်။ ဟေတုပစ္စယမှာမူ အကြောင်းဖြစ်၍ ကျေးဇူးပြုတတ်သည့်တရားဟု အဓိပ္ပါယ်ယူနိုင် ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးသားသည့် ပဋ္ဌာန်းကျမ်းများတွင်မူ ဟေတုကို Root...
၁- ဟေတုပစ္စယောHetu Paccayo (Root condition) (4/6)
Right understood & Wrong understood (zawgyi) ဤနေရာတွင် သမ္မာဒိဋ္ဌိနှင့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ကြောင်း နှစ်ပါးစီကို ဖော်ပြလိုပါသည်။ သမ္မာဒိဋ္ဌိဟူသော အယူ မှားမှု Right understood ဖြစ်ရန် အကြောင်းနှစ်ပါးရှိ၏။ ၎င်းင်းတို့မှာ “ပရတော စ ...
၁- ဟေတုပစ္စယောHetu Paccayo (Root condition) (5/6)
မရောင့်ရဲနိုင်သည့် ကိလေသာ လောဘ၊ ဒေါသနှင့် မောဟတို့သည် အကုသိုလ်ရေသောက်မြစ်တို့ ဖြစ်ကြ၏။ လောဘနှင့် စပ်လျဉ်း ၍လည်း ‘ဗဟုကေ ပစ္စယေ ဒေန္တော၊ တယောပေတေန ပူရယေ’ဟု စာပေ၌ လာရှိပါသည်၊ ပေးပေးသမျှ၊ ပံ့ပိုးသမျှ မည်မျှ ကြီးကျယ်စေကာမူ လောဘက...
၁- ဟေတုပစ္စယောHetu Paccayo (Root condition) (6/6)
နာမ်တရားရုပ်တရားတို့ ကျေးဇူးပြုခြင်း zawgyi နာမ်တရားက နာမ်တရားကို အချင်းချင်းကျေးဇူးပြုခြင်းဟူသည် အလောဘ၊ အဒေါသ၊ အမောဟက နာမ်တရားဖြစ်သည့် ယှဉ်ဘက်စိတ် စေတသိက်တို့ကို ကျေးဇူးပြုခြင်းပေတည်း။ နာမ်တရားက ရုပ်တရားကို ကျေးဇူးပြုခြင်းဟူသည် ကုသိုလ်ဟိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာသည့် စိတ္တဇရုပ်ကို ကျေးဇူးပြုခြင်းတည်း။ နာမ်က...
Sep 29 th, 2019
Paṭṭhāna (24 conditional relations) ပဋ္ဌာန်း – ၂၄ ပစ္စည်း